Kooxda Manchester United oo suuqa bisha Janaayo dib ugu laabanaysa Paulo Dybala – Gool FM
(Manchester) 11 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qorsheynaysa inay bisha Janaayo la soo wareegto weeraryahanka naadiga Juventus ee Paulo Dybala.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqo garoonka Old Trafford qeybihii dambe ee suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, halka kooxda Tottenham Hotspur ay sidoo kale xiiseynaysay.
Labada naadi midkoodna ma awoodin inay heshiis la gasho Dybala, inkastoo dalabka mushaharka gooldhaliyaha iyo arrimaha ku saabsan xuquuqda sawirradiisa la rumeysan yahay inay kor u qaadeen heshiis.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay warinayso Tuttosport, kooxda Man United ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo kiciso xiisaheeda ay u qabto xiddigan marka la gaaro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxda 20-ka jeer haysata horyaalka Ingiriiska inay diyaar la noqon doonto dalab aan la xakamayn Karin, iyagoo isku dayaya inay 25-sano jirka keenaan Manchester bartamaha xilli ciyaareedkan 2019-20.
Dybala, kaasoo kaliya ciyaaray 14 daqiiqo horyaalka Serie A marxaladaha hore ee xilli ciyaareedka ayaa heshiiskiisa haatan uu kula jiro kooxda difaacanaysa horyaalka Talyaaniga waxa uu ku eg yahay bisha June ee sanadka 2022-ka.
Man United ayaa kaliya shan dhibcood ka heshay afartii kulan ee ugu horreysay xilli ciyaareedka horyaalka Premier League, iyagoo ku guuldarreystay inay badiyaan tan iyo bilowgii horyaalka ee kulankii furitaanka oo ay wajaheen Chelsea.